Dihy ankehitriny – Any Tchad: mampiofana ireo mpitsoa-ponenana, ankizy sahirana i Julie I. | NewsMada
Dihy ankehitriny – Any Tchad: mampiofana ireo mpitsoa-ponenana, ankizy sahirana i Julie I.
Maro ny tanora Malagasy sangany eo amin’ny soradihy. Samy manana ny mampiavaka azy izy ireny. Ankoatra ny fizarana fahaizana, mampiaraka izany amin’ny hetsika sosialy ihany koa i Julie Iarisoa. Anisan’ny misitraka izany ireo mpitsoa-ponenana, any ambanivohitr’i Tchad any.
Hafa noho ny hafa ny sehatra nizaran’i Julie Iarisoa, mpanao soradihy ankehitriny tsy zovina amin’ny maro intsony, ny fahaizany sy ny traikefany eo amin’ity tontolon-javakanto iray ity, amin’izao fotoana izao. Nantsoin’ny fikambanana Ndam Se Na, tarihin’ilay mpanao soradihy Taigue Ahmed, any Tchad, ity mpanakanto malagasy ity.
Izy no nosafidian’ny fikambanana hampiofana ireo mpampiofana dihy, ho an’ireo sokajin’olona sahirana, toy ny mpitsoa-ponenana noho ny ady, ny ankizy eny an-dalambe ary ny vondron’olona any anaty fianakaviana sahirana any. “Ny antony niantsoan-dry zareo ahy, noho izaho manao ilay tetikasa “Dihy ho an’ny rehetra”, ao amin’ny Espace Maray any Androndra. Eo koa ny fanaovako asa sosialy amin’ny alalan’ny dihy”, hoy ny fanazavan’i Julie Iarisoa.
Tanjon’ny fanofanana ireo mpampiofana momba ny dihy, any Tchad, ny hanamafy ny traikefa momba ny dihy ho fitaovana hampivoarana ara-tsosialy any amin’ireo fianakaviana misedra fahasahiranana sy voatery mitsoa-ponenana noho ny ady. Efa vita ny iray volana nanaovana fiofanana teorika (ny 14 avrily hatramin’ny 14 mey teo). Tao anatin’ny fampiharana kosa izy ireo, taorian’io hatramin’ny androany.
Manome atrikasa sy manao fampisehoana ho an’ireo mpitsoa-ponenana, any amin’ny sisin-tany, izay toerana misy ady matetika. Toerana ambanivohitr’i Tchad izy ireo, raha ny fanazavan’i Julie Iarisoa. Maharitra telo herinandro ny fampiharana, izany hoe hifarana ny faran’ity volana mey ity ary mbola hiverina any, ny volana septambra, hanohy ny atrikasa sy hanao tombana ny zava-bita.
“Ho ahy manokana, manampy ny traikefa efa ananako ny fanofanana aty… Ahitana ny zava-misy, izay tsy mitovy ny any Madagasikara ary manosika ahy handroso hatrany amin’ny fizarana ny dihy eo amin’ny sehatra sosialy. Mpanao soradihy dimy izahay no manaraka ilay fiofanana”, hoy i Julie Iarisoa.